Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Nanendry Lehiben'ny Mpitantana ara-bola vaovao i Boeing
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Brian West, mpitarika vola sy mpitarika orinasa efa hatry ny ela manana traikefa amin'ny aerospace, manufacturing, fotodrafitrasa, serivisy fampahalalam-baovao manerantany ary indostria hafa, nomena anarana hoe Boeing CFO vaovao.
West dia hitarika ny lafiny rehetra amin'ny paikady ara-bola, ny fahombiazana, ny fanaovana tatitra ary ny fandrindrana asa lavitra ataon'ny Boeing, ary koa ny fifandraisan'ny mpampiasa vola, ny tahirimbola, ny mpanara-maso ary ny asa fanaraha-maso.
West dia hanao tatitra amin'ny filoham-pirenena Boeing sy CEO David Calhoun ary hiasa ao amin'ny Executive Council an'ny orinasa.
Nandimby an'i Greg Smith i West, izay nanambara ny fikasana hisotro ronono, nanomboka ny volana jolay lasa teo.
The Orinasa Boeing i Brian West dia nanendry an'i Brian West ho filoha lefitra mpanatanteraky ny orinasa ary lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola nanomboka ny 27 aogositra 2021.
Amin'ity andraikitra ity dia hitarika ny lafiny rehetra amin'ny paikadin'i Boeing, ny fahombiazany, ny fanaovana tatitra ary ny fandrindrana asa lavitra ny West, ary koa ny fifandraisan'ny mpampiasa vola, ny tahirimbolam-panjakana, ny fanaraha-maso ary ny asa fanaraha-maso. West dia hanara-maso ihany koa ny ezaka fanovana orinasa ary hanana andraikitra ambony amin'ny orinasa Boeing Capital Corporation. Izy dia hanao tatitra amin'ny filoha Boeing sy CEO David Calhoun ary hiasa ao amin'ny Executive Council an'ny orinasa.
"Brian no fahefana mpanatanteraka tsara indrindra ho an'ny CFO manaraka an'i Boeing noho ny fitantanana ara-bola manan-danja sy ny traikefa stratejika maharitra eo amin'ny fikambanana manerantany manerana ny indostria aorinan, ny famokarana ary ny serivisy," hoy i Calhoun. "Faly aho niara-niasa tamin'i Brian teo aloha, ary izy dia mpitarika miavaka izay manana fahaiza-miasa sy fanoloran-tena amin'ny mangarahara amin'ireo mpiray antoka hampandroso ny ezaka ataontsika rehefa manohy mifantoka amin'ny fiarovana sy ny kalitao izahay, manatsara ny zava-bitanay ary manova ny orinasanay ho an'ny ny ho avy."
Miditra Andrefana Boeing manaraka ny asany mahomby sy maro karazana amin'ny andraikitra ara-bola sy ara-bola ho an'ny zokiolona maro, ahitana ny aerospace, manufacturing, fotodrafitrasa, fitsaboana, serivisy fampahalalam-baovao manerantany, fitantanana ara-bola sy risika. Izy dia talen'ny tompon'andraikitra ara-bola ao Refinitiv nanomboka tamin'ny taona 2018, ary CFO teo aloha ary filoha lefitra mpanatanteraky ny Operations for Oscar Health Insurance sy CFO ary COO of Nielsen. Talohan'ny Nielsen, nandany 16 taona tao amin'ny General Electric i West, toerana nanompoany ho CFO an'ny GE Aviation sy CFO an'ny GE Engine Services. Ny toerany amin'ny toerany amin'ny fitarihana ara-bola amin'ny orinasa GE dia nahitana plastika, fitaterana ary angovo.
West dia mpikambana iray amin'ny birao mpanorina ao amin'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra monina any Connecticut, izay ny iraka dia ny manomana ny ho avy vehivavy mpitarika isan-karazany miaraka amin'ny fahaiza-manao, fiaraha-monina ary ny fifandraisana mba hiroborobo eran'izao tontolo izao. Mpikambana ao amin'ny Future 5 izy teo aloha, fikambanana iray manampy ireo mpianatra tsy ampy fitaovana ao Stamford, CT hahatratra ny fahaizan'izy ireo feno.
West dia manana mari-pahaizana licence momba ny fitantanam-bola avy amin'ny Siena College ary Master in Business Administration avy amin'ny Columbia Business School.
Nandimby an'i Greg Smith i West, izay nanambara ny fikasany hisotro ronono, nanomboka ny volana jolay lasa teo. Ny orinasa dia nanendry an'i Dave Dohnalek, filoha lefitra ambony ao amin'ny Boeing ary mpitahiry vola, amin'ny anjara asan'ny CFO vonjimaika mandra-pahatongan'ny West hiditra amin'ny orinasa amin'ny faran'ny volana Aogositra.
"Te-hisaotra an'i Greg indray aho noho ny fandraisany anjara lehibe tamin'ny mpiasa, mpanjifa, vondrom-piarahamonina ary ny orinasanay nandritra ny telo-polo taona niarahany niasa tamin'i Boeing," hoy i Calhoun. “Te hisaotra an'i Dave ihany koa aho tamin'ny fandraisana andraikitra mitarika vonjimaika ny fikambananay ara-bola. Nandritra ny am-polony taona maro niainan'ny mpitantana mpanatanteraka ao amin'ny Boeing manerana ny tahirimbolam-panjakana, ny fifandraisan'ny mpampiasa vola, ny fandrindrana ara-bola ary maro hafa, Dave dia mpitarika hajaina sy mahomby izay hitondra torolàlana feno fampahalalana sy fandanjalanjana ho an'ny fikambananay mandritra ity vanim-potoana tetezamita ity. ”